Siyaasi ka mid ah soomaalida Iswiidhan oo ay kooxda Daacish dil ugu hanjabtay | Somaliska
Siyaasi ka mid ah soomaalida Iswiidhan oo ay kooxda Daacish dil ugu hanjabtay
Siyaasiga lugu magacaabo Abshir Cismaan oo ka tirsan xisbiga Moderaat-ka ee degmadda Skilstuna ee duleedka magaalada caasimadda Iswiidhan, ayaa shaaca ka qaaday in dhalinayrro taageera u haya kooxda daacish ay u soo gubiyeen hanjbaado.
Hajnabaadan ayaa timid ka dib markii sanadkii 2o15-kii wareysi uu siiyey idaacadda P4 ee Sörmland u sheegay in degmadda ay joogaa dhalinayrro taageero xoogan u haya kooxdaasi daacish. Hanjabaadahan loo soo marsiiyey baraha bulshada ayaa loogu wargeliyey in haddii uusan ka laaban hadalkiisa ay kooxda talaabo ka qaado donnto.
“Waxaa la ii soo qoray haddii aadan ka laaban oo aadan yeelin wax kasta oo aan rabno in aad Illaahey la kulmi doontid” ayuu yiri Abshir oo ka waramayey hanjabadaha ay kooxdani baraha bulshadda u soo mariyeen. Siyaasigan ayaa sheegay in kooxdani ay fariimahooda u daliishadeed aayado quraan ah, isala markaasina lugu tilmaamay inuu yahay kaafir weyn.
Tan iyo markii hanjabadahan ay soo gaareen ayuu siyaasi Abshir sheegay in weli dareemayo culeys ee aanu aheyn mid ku kooban maalmo, islamarkaasina ay boolisku ilaalo ka hayaan. Ugu dambeyntiina siyaasigan ayaa sheegay in hanjabadahaasi soo gaaray aaneey wax is badal ah ku keenin howlaha siyaasadda ee faraha kula jiro, sidoo kalena sheegay in kooxahani hadafkoodu yahay sideey u aamusin lahaayeen. Abshir waxaa uu ka mid yahay tirro siyaasiin ah oo la sheegay in kooxdani Daacish ay hanjabaado u dirtay.